Top 5 Ghế massage Boss nào tốt chất lượng nhất hiện nay | Muasalebang - Muasalebang
Top 5 Ghế massage Boss nào tốt chất lượng nhất hiện nay | Muasalebang
Đang Đọc: Top 5 Ghế massage Boss nào tốt chất lượng nhất hiện nay | Muasalebang in Muasalebang
Eminyakeni embalwa edlule, massage isitulo isiba idivayisi yokunakekelwa kwezempilo egcwele umzimba wonke ethola ukunakwa okukhulu kubathengi. Ngokusebenzisa leli thuba, izinhlobo eziningi zemikhiqizo yethule izihlalo zokubhucunga ngenhloso yokuhlangabezana nezidingo zabantu. Futhi Isihlalo sokubhucunga boss ingesinye sezihlalo zokubhucungwa kwayo yonke iminyaka, enezici eziningi ezisebenzayo zokwesekwa kokwelapha ukuthuthukisa impilo kubasebenzisi abafanele!
1 Senziwa kuphi isihlalo sokubhucunga sika-Boss?
2 Linganisa isitulo sokubhucunga se-Boss sangempela sisihle?
3 Izihlalo ezi-5 eziphezulu zokubhucunga ama-Boss ezinhle, ezisezingeni eliphezulu
3.1 1. Isihlalo sokubhucunga i-Boss MCB-301
3.2 2. Isihlalo sokubhucunga i-boss DMJ 160
3.3 3. Isihlalo sokubhucunga i-Boss DMJ-200
3.4 4. Isitulo sokubhucunga i-boss DMJ 189
3.5 5. Boss massage chair MCB-901
Senziwa kuphi isihlalo sokubhucunga sika-Boss?
U-Boss waziwa njengomunye wemikhiqizo yezihlalo ezihlonishwayo emakethe yaseVietnam. Umkhiqizo we-Boss ekuqaleni wasungulwa eqenjini lonjiniyela be-elekthronikhi kanye nochwepheshe bezokunakekelwa kwempilo, ama-physiotherapists. “Yimbeleko” yezindlela zokubhucunga ezingokwesiko zedivayisi.
Isihlalo sokubhucunga boss Okwamanje isatshalaliswa emazweni amaningi emhlabeni jikelele. Ngaphezu kwalokho, inkampani iphinde yavula amagumbi ombukiso nezitshalo zokukhiqiza ezitholakala ngqo emazweni amaningi ukuze yandise ukuqwashisa ngomkhiqizo. Ngesikhathi esifanayo kulula ukuthunyelwa nokusabalalisa ezimakethe zamazwe ngamazwe. Imikhiqizo elethwa ngu-Boss yonke impahla yokunakekelwa kwezempilo njengemishini yokubhucunga ephathwayo, imicamelo yokubhucunga, amakhushini okubhucunga….Futhi okubaluleke kakhulu isitulo sokubhucunga sika-Boss esisezingeni eliphezulu, ukuze uthole ulwazi oluhle.
Linganisa isitulo sokubhucunga se-Boss sangempela sisihle?
Isihlalo sokubhucunga boss Ingabe yinhle noma cha mhlawumbe inkinga amakhasimende amaningi ayikhathalelayo lapho ekhetha ukuthenga. Ngoba akekho ofuna ukuchitha imali eningi futhi athole idivayisi engasebenzi, engeyinhle neze. Ngakho-ke, ake sikusize ngezibuyekezo ezilandelayo.
Isihlalo sokubhucunga i-Boss sikhiqizwa emigqeni yesimanje yezobuchwepheshe, eqinisekiswa ngonjiniyela abaholayo nochwepheshe kulo mkhakha.
Uchungechunge lwezihlalo ze-Boss massage lukhiqizwa ngezinto ezisezingeni eliphakeme, ezinokwethenjelwa okuphezulu nokuqina ngisho nasesimweni sezulu saseVietnam.
Isihlalo sinomthamo omkhulu kakhulu wokulayisha, ngomklamo wesimanje ohlale uqinisekisa ukuphepha kwamakhasimende lapho usebenzisa.
Isitulo sokubhucunga i-Boss sisetshenziswa uchungechunge lobuchwepheshe besimanje obufana nalena: I-Intelligent AI chip, Accurate Body Scan, ubuchwepheshe be-zero gravity (Zero Gravity) noma ukushisa kwe-Carbon Nano infrared…
Ikakhulukazi i-3D, isistimu ye-4D roller, isistimu ye-airbag ebushelelezi, njll. ivumela ukudala ukunyakaza okukhaliphile okulingisa ngokunembile ukunyakaza kokubhucungwa kwabasebenzi abangochwepheshe.
Isihlalo sokubhucunga i-Boss sihlukile ngokuzivocavoca okuningi okuzenzakalelayo okufana nalokhu: ukubhucungwa okusheshayo, ukubhucungwa okunethezekile, ukubhucunga umzimba, ukubhucunga umzimba ogcwele, ukubhucunga umzimba…
Ubukhulu besihlalo sokubhucunga i-Boss bukhulu kakhulu, ngakho-ke kuzothatha isikhala.
Izindleko eziphezulu, azibafanele abantu abahola kancane.
Izihlalo ezi-5 eziphezulu zokubhucunga ama-Boss ezinhle, ezisezingeni eliphezulu
Udinga ukuthenga imodeli Isihlalo sokubhucunga boss izinga, ilungele izidingo ukusetshenziswa. Bese-ke sethula kini amamodeli ezihlalo ezi-5 eziphezulu zokubhucunga ama-Boss.
1. Isihlalo sokubhucunga i-Boss MCB-301
Imodeli yesitulo sokubhucunga i-Boss MCB-301 ikhiqizwa emigqeni yesimanje yobuchwepheshe baseJapan. Kuhlanganiswe nezici ezikhethekile ezingenakubalwa ukusiza umndeni wonke uthole ukunakekelwa kwezempilo okuphelele. Lesi sihlalo sokubhucunga esisezingeni eliphezulu se-Boss MCB-301 siklanywe kalula kodwa ngaphandle kokulahlekelwa ukubukeka kwaso kwesimanje nokusezingeni eliphezulu. Kunemibala emi-2 eyinhloko Okunsundu Okumnyama kanye Okumnyama Nokumhlophe, okuvela kuyo i-MCB-301 eyenza kubonakale kunamandla kubasebenzisi ekuqaleni kokuyibona.
Ikakhulukazi, Isihlalo sokubhucunga i-Boss MCB-301 Futhi inesici esihlaba umxhwele sokulawula izwi lesi-Vietnamese. Ngaphezu kwalokho, kukhona ukuzivocavoca kwe-massage okuzenzakalelayo okungu-12 okuhlanganisa: ukunethezeka, ukuphumula, ukwelula, ihlombe nentamo, umhlane nokhalo, ukubhucungwa kwe-chiro, ukubhucungwa komzimba ogcwele, ukululama kokukhathala, ama-meridians aqinile, ukubhucungwa kwezinqe, Ukubhucungwa kahle kokulala nge-airbag massage. Esigabeni sezihlalo zokubhucunga ezigcwele umzimba wonke ezisezingeni eliphezulu, i-Boss MCB-301 iphinde ihlanganiswe nobuchwepheshe bokubhucunga besimanje manje obubizwa ngokuthi ubuchwepheshe bokumasaji be-zero-gravity.
Lesi sihlalo sokubhucunga se-Boss sifakwe imodi yokushisa ye-infrared enamandla okushisa ujule ezindaweni ezibuhlungu. Kuhlanganiswe nesistimu ye-roller ye-3D kanye ne-airbag yomphumela wokusikhipha umzimba, umzimba uhlale ukhululekile kakhulu.
Intengo yesithenjwa: 72,500,000 VND
2. Isihlalo sokubhucunga i-boss DMJ 160
Idivayisi Isihlalo sokubhucunga i-boss DMJ 160 Lena inerola yokubhucunga yesimanje elandela umzila we-SL. Okusho ukuthi, i-roller izolandela umugqa ofana nohlamvu S olunamakhontoyutha amaningi, ngaleyo ndlela ihambisane nokuma komgogodla wakho. Idivayisi ingaphinda ibhucunga izinyawo nge-Shiatsu reflexology, okungenye yezici ezinhle amakhasimende azithandayo. I-foot roller yakhelwe ngokukhethekile ukuthi ilingane ne-arch yonyawo lomsebenzisi, okuvumela ukubhucungwa ukuthi kufinyelele emzimbeni ngendlela engcono kakhulu.
Umcamelo wokushisa wesihlalo sokubhucunga ungafudumala eduze kwemisipha yomgogodla, lesi esinye sezici ezibalulekile zalo mkhiqizo we-Boss DMJ 160. Isici sokushisa esikabili esinezinga lokushisa elingu-40 degrees Celsius ukuze kushukunyiswe ukugeleza kwegazi, okuletha igazi ebusweni besikhumba lapho ama-massage roller evuselela ngempumelelo izicubu ukuze andise ukujikeleza kwegazi. Isici esinwebekayo esigcwele umzimba wesihlalo sokubhucunga i-Boss DMJ 160 siyindlela entsha futhi yokuthi abasebenzisi baphumule futhi baphumuze imisipha yabo.
Izilawuli zesitulo zinedizayini yemenyu egcwele ngendlela enemininingwane eminingi futhi okulula ukuyiqonda. Ikuvumela ukuthi ulawule, ukhethe futhi ulawule yonke into ukuze uthole umuzwa wokugcina wokubhucungwa.
Intengo yesithenjwa: 34,000,000 VND
3. Isihlalo sokubhucunga i-Boss DMJ-200
Isihlalo sokubhucunga i-boss DMJ 220 inomklamo oyinkimbinkimbi nowesimanje, onikeza abasebenzisi umuzwa wokubhucungwa ongakaze ubonwe. Ngaphezu kwalokho, isihlalo sokubhucunga i-Boss DMJ-200 esinobuchwepheshe bokubhucunga be-4D, sihlanganisa izindlela zokubhucunga eziguquguqukayo ngqo ezindaweni zokutshopa emzimbeni womuntu, ngaleyo ndlela zisisiza ukuthi sizizwe singokoqobo njengezandla zochwepheshe onakekelayo. Ubukhulu bendawo yomlenze wesihlalo bungabuye bulungiswe phezulu naphansi, ngaleyo ndlela kuqinisekiswe ukuthi kufanelekile kumalungu amaningi omndeni.
Ujantshi we-SL ugona umzimba, okukuvumela ukuthi ujabulele ukubhucungwa kwekhanda kuya ezwaneni ukuze uthole ukunethezeka okuphelele. Ngaphezu kwalokho, ama-roller wesihlalo nawo anokushisa okuhlanganisiwe, okusebenza kuwo wonke umhlane ukuze anikeze ukufudumala okwanele, okwenza induduzo emangalisayo. Lo mugqa wezihlalo zokubhucunga i-Bossa unama-roller ahlanganisiwe ematheni ezinyawo esebenzisa ubuchwepheshe bebhola elijikelezayo elihlanganiswe namafindo abicah awusizo kakhulu ematholeni.
Le divayisi ye-Boss massage chair ingaphinda ilawule isitulo sokubhucunga esihlakaniphile ngomakhalekhukhwini, ithebhulethi nge-bluetooth. Abasebenzisi badinga kuphela ukulanda isofthiwe yohlelo lokusebenza ukulawula isitulo sokubhucunga ocingweni lwabo ukuze bakwazi ukusisebenzisa.
Intengo yesithenjwa: 33,000,000 VND
4. Isitulo sokubhucunga i-boss DMJ 189
Isihlalo sokubhucunga i-boss DMJ 189 yakhelwe ngokucophelela kuyo yonke imininingwane ngemibala ewubukhazikhazi, ngaleyo ndlela yenza indawo yakho ibe kanokusho futhi iphile. Isihlalo sokubhucunga siphakanyiswe ngesikhumba esifana neseqophelweni eliphezulu esinebala lesikhumba le-matte, elibushelelezi futhi elihlala isikhathi eside. Lo mklamo uhlukile kweminye imikhiqizo yesitulo sokubhucunga esijwayelekile, enekhanda elikhulu, ihlombe kanye nendawo yokubeka unyawo ukuze ihlanganise ngokugcwele umzimba womsebenzisi. Ihlanganiswe nesistimu ye-airbag ethuthukisiwe, injini yokubhucunga eqinile, ngakho-ke idivayisi ifanele ukuba umkhiqizo ophelele wabantu abasebenzayo.
I-Boss DMJ 189 isetshenziswa ubuchwepheshe obuphambili be-pneumatic, ikunikeza ukubhucungwa okuvelele nokucabangelayo. Izindlela zokubhucunga zedivayisi nazo zihlukene futhi zicebile ngezindlela ezi-6 zokubhucunga ezijulile zesidingo sakho ngasinye. Ikakhulukazi isistimu yokusabalalisa komoya enama-airbag angama-72, ingalingisa ukunyakaza kokubhucunga kwe-masseuse ochwepheshe ukunikeza umuzwa wokubhucunga ngokucophelela. Isihlalo sokubhucunga i-Boss siphinde siklanywe ngokukhethekile ngokunyakaza okunamandla okujulile, ukunciphisa ubuhlungu nabasubathi bezemidlalo.
Idizayini yemoto ephephile enejubane elincane kakhulu, ukuze ube nomthelela ojulile emisipha yakho. Ngaphezu kwalokho, kungenzeka futhi ukuthola isizukulwane se-massager II esizenzakalelayo nge-infrared, ngaleyo ndlela uzitholele ngokuzenzakalelayo izikhundla zomzimba, ukukhetha imodi yokusikhipha ekufanele kakhulu.
Intengo yesithenjwa: 155,000,000 VND
5. Boss massage chair MCB-901
U-Boss MCB-901 unomklamo kanokusho onomklamo omusha obizwa ngokuthi “i-Smart compartment” enezici ezithakazelisa kakhulu. Ungaphumuza sonke isibhakabhaka esinezinkanyezi nawe ngephrosesa yesibonisi “Isibhakabhaka esinenkanyezi”. Ngakho-ke uma uhlezi esihlalweni bese uvula isici, uzoba nomuzwa wokugcina wokuphumula njengokubuka izinkanyezi ezicwebezelayo esibhakabhakeni. Isivalo sekhompathimenti singazungeziswa phezulu / phansi esilungele kakhulu abasebenzisi. Umkhiqizo uklanywe ngengalo ye-massage ye-3D ehlakaniphile, evumela ukuphakamisa nokwehlisa, ukwazi ukwelula ngaphambi nangemuva futhi umaseja ngaphandle kokubanga umsindo.
Lolu cingo luphinde lube nesici sokubhucunga esizenzakalelayo ngokwezitho zomzimba ezinezindlela eziyi-6 zokubhucunga ezizenzakalelayo. Ngokuhambisana nalokho ukusekelwa kwamadivayisi ahlakaniphile (njengamafoni noma amathebulethi) angasebenzisa isofthiwe nezinhlelo zokusebenza ukulawula nge-Bluetooth.
Isihlalo sokubhucunga boss Futhi inesici esakhelwe ngaphakathi sokudlala umculo wedijithali engxenyeni engenhla nge-Bluetooth, okukuvumela ukuthi uxhume izingoma zakho ozithandayo kalula. Umkhiqizo uphinde ube nokwelashwa kokushisa kwe-infrared okuvela ku-carbon fiber emhlane nasematholeni, okusheshisa ukujikeleza kwegazi emzimbeni wakho. Ngaphezu kwalokho, i-footrest ifakwe isici esikahle sokumasaji se-Guasha sibonga amasethi ama-2 wamarola. Ivumela ukuginqika nokunwaya ezinyaweni, izithende zokubhucunga kanye nokubhucunga izinyawo nezithende.
Intengo yesithenjwa: 239,000,000 VND
Ngakho-ke siqeda ngawe ukuthola abaphezulu aba-5 Isihlalo sokubhucunga boss ikalwe kakhulu emakethe. Kholwa ukuthi ngalo mugqa wemishini, uzoba nezikhathi ezinethezeke kakhulu, uphumule futhi uthuthukise imisebenzi yomzimba. Ngakho-ke ulindeleni ngaphandle kokukhetha imodeli yesitulo se-Boss massage ngokushesha!
Xem Thêm Top 10+ thương hiệu thời trang nữ được ưa chuộng nhất 2022 | Muasalebang
Ốc mỡ là gì? Giá ốc mỡ là bao nhiêu và cách làm ốc mỡ hết nhớt | Muasalebang